थप उपचारको लागि कृष्णलाई लिएर विदेश हिँडिन रुपा… हेर्नुहोस फोटोफिचर… – पुरा पढ्नुहोस्……
थप उपचारको लागि कृष्णलाई लिएर विदेश हिँडिन रुपा… हेर्नुहोस फोटोफिचर…
काठमाडौँ। रुकुमको सानोभेरी गाउँपालिका मा जन्मिएका कृष्ण ओली एक विद्युत प्राविधिक हुन्। आफूले काम गरेर पैसा कमाई श्रीमतीलाई स्टाफ नर्स बनाउँछु भनेर बिजुलीको काम गर्दै आएका कृष्ण ओलीको अहिले दुवै हात र बायाँ खुट्टा छैन्।
समजामा यस्ता धेरै घटनाहरु हुने गर्छन जो कसैले पनि सोचेको हुँदैन भविष्य कस्तो र के हुनेछ भनेर । केहि गरौ , भनेर कयौं सपना बोकेका कृष्ण र रुपाको जिबनमा सायद कसैले नसोचेको यो बज्रपात आई परेको छ।
उनीहरु १ वर्ष अगाडी मात्र प्रेम विवाह गरेका थिए भने भविष्यका लागि धेरै सपनाहरु देखेका थिए । तर त्यो सपनामा एकाएक बज्रपात आईपरेको छ। अहिले उनीहरुलाई सहयोगको खाचो रहेको छ भने सहयोग जुट्ने क्रम पनि जारि छ।
२१ वर्षीय कृष्णको अनुहारमा झट्ट हेर्दा निकै स्वस्थ देखिन्छन्। तर उनीमाथि ठुलो बज्रपात आइलागेको छ। विद्युत प्राविधिक पढेका उनी तुल्सीपुरमा विद्युत विस्तारको काम गर्दै आएका थिए। गत जेठ २५ गते विद्युत लाइने विस्तार गर्ने क्रममा उनलाई ११ हजार भोल्टेज क्षमताको करेन्ट लागेर कृष्णले सधैँका लागि दुवै हात र एउटा खुट्टा गुमाउनु पर्‍यो ।
थप उपचारको लागि कृष्ण ओली र रुपा ओली भारतको मुम्बई गएका हुन् ।
तस्बिर रुपा ओली फेसबुुक
Prevबन्ने भयो भाईरल भिम बहादुर बिकको घर, नायक पल शाहले गरे घरको शिलान्यास….
Nextभिडियो हेर्नुहोस् : कतै पार लागेन भने म कहाँ आउनुहोस क्यान्सरदेखि एचआइभीसम्मको उपचार गर्छु -सुब्बा
ग्यास्ट्रिक भएको छ ? झुक्किएर पनि नखानुस् यी खानेकुरा, जानकारी अहिले शेयर गर्नुहोला र फुर्सदमा पढ्नुहोला, (ज्ञान बढ्छ)
फेरी आयो रबि लामीछानेको समर्थनमा यस्तो गीत ‘अब आए देश बचाउन रबि लामिछाने ‘ – हेर्नुहोस(भिडियो सहित)
काठमाडौंको एक अपार्टमेन्टका एकै परिवारका तीनजनामा कोरोना संक्रʼमणको आशंका…